Amanyɔfoɔ, Sɛ Obi De Mo Kɔhwɛ Nkwa A, Mo Mmfa No Nkɔhwɔ Owuo - HOT STORIES GHANA
Amanyɔfoɔ, Sɛ Obi De Mo Kɔhwɛ Nkwa A, Mo Mmfa No Nkɔhwɔ Owuo
Bismark Attobrah 10 months ago 5 min read
Me mmɔfra berɛ mu wɔ Goka, dakoro anwumerɛ a y’adidi awie, me Nana Akua Addai too anansesɛm faa Kwaku Ananse ɔsisifoɔ ho kyerɛɛ me.
Na me Nana de retu me foɔ afa adidigya ne pɛsɛmenkomenya ho no, ɔde duabroni, ɔtatea kɔkɔɔ, Kwaku Ananse yɛɛ mfantoho.
Ɔse: “abere bi, Kwaku ‘nitifoɔ kɔɔ Nana Nyankopɔn hɔ sɛ ne yere Asɔ Yaa ho afono no. Na mpo ɛnyɛ ɛno nko, na mmom, Asɔ wɔ ano a ɛse ne tekyerɛma wɔ mu a ɛtumi di aduane. Ɛnti, sɛ Ɔsorosoro Hene no bɛtie n’adesrɛ ayɛ n’apɛdeɛ ama no a, anka ɔnyi ɔbaa sɔɔnɔ mma no a, ɔnne ano ne ɛse a ɔbɛtumi de adidie”.
“Saa berɛ no nso, na Kwaku Ananse ne ne yere Asɔ atiti wɔn mmɔwerɛ mu awoso bayerɛfuo kyenkyinenkye bi ato hɔ. Ɛnso, Kwaku nkoaa na tɛkyerɛmawoɔ fata noɔ, ɛnfata ne yere no sɛ ɔdeɛ (bayerɛ) no baako mpo kɔ nano”.
“Awurade a naso yɛ hare ma ɔdasani biara mpaebɔ ne nadesrɛ, ɔhyɛɛ Kwaku sɛ ahomakye ɔmfa neyere no mforo mmra N’heniem’ wɔ ɔsorosoro”.
“Ampa, akokɔnini bɔnn ‘koo’ deɛ ɛdi kan, na Kwaku ato Nana Nyankopɔn a ne yere Asɔ nsa hyɛ namɔtoam’ wentemm”.
“Ɔbɔadeɛ no ara maa nnahɔɔ tɔɔ Eno Asɔ Yaa so, na anni sima bi, ɔsɔɔ Kwaku yere nsa sane dee n’adeɛ brɛɛ no a, anwanwasɛm, ɔnne anoo mpo na nka mpo sɛ y’ahu nese ne ne tɛkyerɛma”.
“Deɛ ɔsisifoɔ rehwehwɛ ara nesɛ neyɔnko bɛdi awerɛhoɔ, asuo. Kwaku dee neyere baa fie, sane daa Ɔnwonfoɔ no ase wɔ n’abisadeɛ anwansono a wayɛ ama nono nti”.
“Okunu ne ɔyere a ɔnne ano bio yi bɛduruu Kwaku akakye, wɔ ne fiee mu. Ananse de hwiremawoɔ ne fɛwdie yii bayerɛ dwomua miɛnsa maa neyere Asɔ sɛ ɔmɔ apesie mma no”.
“Ɔbaa a ɔdɔ nekunu, Eno nso amposo neti, ɔpopoo nesa ano bɔɔ akɔnɔ ampesie bi a nkontomire abɔmu a watwi koobi afera, de ngo kɔkɔɔ ataa ho, sii Kwaku odidifoɔ hɔ wɔ adidipono so”.
“Wɔsomaeɛ maa wɔfrɛɛ Kwaku firii Dame agodie ase baaeɛ maa no bɛhohoroo ne nsa tenaa aduane yi ho a, ɔde no: ɛha yɛden, ɛha yɛmerɛ a, femframm, ɔdii ampesi kyerefo yi tuu aseɛ, de netekyerɛma baree kyɛnsee no ase”.
“Na Ananse redidie no, na ɔredi Eno Asɔ ho fɛw, ka sɛ: ‘ao, medɔ, mɛnya a, anka wowɔ ano ne tɛkyerɛma na watumi ate aduane yi mu dɛ kakra mpo”.
“Asɔ Yaa amfii nekunu sisifoɔ yi, na mmom ɔkaa wɔ netirim sɛ, ‘sɛ wonim Onyame tirimpɔ a, anka wobɛ sesa afiri w’adwenmɔne ho ɛnɛ da yi ara'”.
“Nna kɔɔeɛ, nna baaeɛ, nanso Eno Asɔ a Kwaku susu sɛ ɔnnidie no daso tesɛ deɛ ɔteɛ a ɔnnfɔn, na nka mpo sɛ wayareɛ”.
“Kwaku wudini a anka netirimpɔ ne sɛ anka ɛkɔm nnosa neyere yi ma ɔnwu, na ɔno nkoaa nni bayerɛ no, annte asɛm yi ase. Ɔbisaa neho sɛ, ‘hwan na ɔnnidie, na nso ɔnnfɔn, anaa ɔnnwuo'”?
“Wei na dakorɔ, Ananse se ɔbɛtetɛ neyere yi ahunu ahintasɛm a ɛwɔm, na ama Asɔ daso reyɛ frɔmfrɔm sene ne kane no mpo”.
“Ne saa nti, ɛda no ahomakye, ɔkraa sɛ ɔrekɔ ahaban mu akɔhwɛ nafidie aba. Ɛhɔ ara na ɔdanee neho wɔ efie no akyi, sane bɛforoo ɛdan no kɔdaa abuu (edan nsamyɛ) no so. Kwaku mpɛ ani nkɔhwɛ a, Eno Asɔ Yaa na wanoa bayerɛ ampesie agu ayewa kɛseɛ bi mu abue so a, ɔreyiyi hyehyɛ namɔtoa mu yi. Ɔyi baako a, na ɔde abɔ abɔmu, na ɔde ahyɛ namɔtoam’ hɔ, horodo, na ɛhyɛ ne yam dadaada. Konkurom!, na Eno adi aduane nyinaa abɔ aseɛ”. (Onwomfoɔ nyansafoɔ Nyankopɔn no ara de Eno ano no kɔhyɛɛ namɔtoam’ hɔ).
“Kwaku hyɛ ɛsoro hɔ rehwɛ nnoɔma anwanwasɛm yi nyinaa no, na ayɛ no sere – annsu. Ɔno a ɔnntumi nsere, ɛna ɔnntumi nnsu nso”.
“Ɔhunuu sɛ, obiara ntumi nsisi Onyankopɔn”.
Ɛtɔ da a, wobɛtumi asisi ɛbinom. Wɔde wɔn adaagye, wɔn nimdeɛ, ne wɔn honam bɛyɛ adwuma ama yɛn, nanso, sɛ mfasoɔ ba so, na ɛduru nedie deɛ a, na ato sɛ ɔsisifoɔ no bɛsrɛ Onyankopɔn ma wato ɔnii no a ɔboaa yɛn no anom’.
Wɔ mfeɛ mpem mmienu ne du-nsia (2016) Ghana abatoɔ no mu no, amanyɔkuomma beberee boaa wɔn akandifoɔ maa tumi bɛdii wɔn nsa. Ɛnso, nwaeho ne adidie duruu hɔ no, obi didi gyaa obi. Mfeɛ nnan akyi, saa nkurofoɔ a wɔtenaa ɛkɔm mu bɛsii mfeɛ mpem mmienu ne aduonu (2020) abatoɔ yi mu no, wakyerɛ sɛ, ɔkwasea dua, yɛnntia so mprenu.
Sɛ obi de wo kɔkyerɛ nkwa a, yɛ mmfa no nnkɔkyerɛ owuo. Deɛ wapɔtɔ ma afeɛ no, ɔnnkyiri sɛ ɔde bɔ mu. Na adidigya nso, ɛne ɔmuna na ɛnam.
Ɔkwaduo, wodeɛ wokɔ o, na aka wonua nom. Mo a moadi nkunim ɛnnɛ a ɛnnam nkurofoɔ mmɔdenmɔ so no, mo mfa wɔn a mobɛtuu wɔn adeɛ so no ahweaseɛ yi nyɛ afutusɛm, na mfeɛ nnan ɛnnyɛ ɔkwan a ɛware biara.
Apɔnkyerɛni a ɔdi kan no tɔ amena mu a, wɔn a wɔdi akyire no sua nanteɛ. Saa ara nso na: dua a Ananse awe awuo no, Ntekuma nntena aseɛ nntɔ nnko. Annyɛ saa a, ɛnyɛ ɔtwee nko na nebɛdɛ nie, mfeɛ nnan reba bio, apasoɔ a wɔde yii kɔkɔsakyi a netiho ammfu bio no, Ghanafoɔ asiahene ne atuahenefoɔ bɛma so bio, ma ntakraa mmoa nyinaa adwane ahinta.
Nyankopɔn nkɔso nhyira yɛman Ghana, na Ɔnkɔso mma yɛn asomdwie ne ɔdɔ!!!!!!
Deɛ ɔpɛ sɛ hooyɛ ne basabasayɛ ba abatoɔ yi akyi, ɛnam mente-meho-ase nti, na wammfa mmra kwan so no, ɛno deɛ, obi nntɔ nsa nhyira nebusuefoɔ, Tumi wura a wo kura Ghana aba-a-aba, de yɛn rekɔ Bɔhyɛ Asaase no so, ɛne onii koro nni no nwonwononwono sɛdeɛ ɛsɛ ɔmanbɔyɛfoɔ.
Previous Democracy Has Made A Mistake In Effutu
Next Ghana Ayekoo